Ukuvakasha kweTuxGuitar, i-GuitarPro Linuxero | Kusuka kuLinux
Ukuvakasha kweTuxGuitar, i-GuitarPro Linuxero
Kudala sahlaziya I-TuxGuitar, iphrojekthi evela e-Argentina okuyindlela ehlukile yamahhala Isigingci pro, owaziwayo umhleli wamaphuzu.
Lapha ngizokhuluma ngalolu hlelo ngizama ukungena ngokujulile ngangokunokwenzeka futhi ngikhombise imisebenzi enayo.
Kuyinto elula ukuyisebenzisa, akudingekile ukuthi ube nolwazi oluthuthukile ukuyisebenzisa.
Lapho sivula uhlelo, iwindi elivelayo yilokhu, kuyo into yokuqala edonsela ukunaka kwethu entanyeni, etholakala ezansi, lapho kuphawulwa khona izintambo nezintambo ezizwakala ngaso sonke isikhathi.
Ngokungafani neGuitar Pro, le ntamo inama-frets angama-23 esikhundleni sama-24, okungaba nzima uma sidlala idwala eliqinile likaSteve Vai noma sidlala insimbi.
Sithola nesigaba kwesokudla, lapho sibona khona izikwele ezinemibala ehlukene, lesi sigaba sikhombisa ingxenye yengoma esikuyo.
Sithola izinkomba, singabeka lezo esizifunayo, eyodwa ngomsindo ngamunye insimbi, hhayi eyodwa kwensimbi ngayinye, ngokwesibonelo, uma engomeni i-synthesizer isebenzisa isibonelo i-Lead Square bese kuba yi-Grand Piano kumele senze ithrekhi ye-Lead Square nenye ye-Grand Piano, yize ngokuhamba kwesikhathi siyi-Jordan Rudess ( Dream Theatre) futhi umsindo singawushintsha ungaphansi kwenkulungwane yesekhondi.
Ngayinye yalezi zingoma inomsindo njengoba sengivele ngishilo, lolu hlelo lunenombolo engapheli yemisindo ejwayelekile. Kuzwakala kanjani? Zizwakala zenziwe kakhulu kepha zenza umsebenzi wazo ngokuphelele.
Into eyodwa okufanele siyikhumbule ukuthi uma senza ithrekhi kufanele sikhombise ukuthi ngabe ukushaywa noma ithuluzi elijwayelekile.
Okwezinsimbi ze-idiophone (i-xylophone, i-metallophone, i-chime, njll.) Kufanele sikhethe ithrekhi ejwayelekile, ngoba ama-idiophones achazwa njengezinsimbi zomculo ezishaywayo, okungukuthi, anikeza amanothi esikalini.
Lena imenyu yezakhiwo, kuyo singaguqula umsindo wethrekhi ngayinye, inani lezintambo zensimbi nokulungiswa kwayo, noma ngabe ithrekhi ingeyensimbi engadingi ukuthi ishunwe noma ingenazo izintambo lapha kufanele silawule ukushuna futhi inani lezintambo ngoba wonke amathrekhi ajwayelekile asethwe ngokuzenzakalela entanyeni yesiginci.
Ngokungafani neGuitar Pro lena ayinayo intambo eyi-12 yokulingisa, engeyona inkinga.
Ngezansi kwebha yamathuluzi singathola ubude benothi ngayinye, Ikota, White, Round, Inothi lesishiyagalombili, njll. Isikhathi ngasinye lapho sibhala inothi kufanele sikhethe ubude balo.
Lapha sithola isibalo sezinkinobho, ithiyori yomculo futhi zombili ngasikhathi sinye ukukhetha ukubona, kuya ngolwazi esinalo lokufunda uhlobo oluthile lomculo weshidi noma olunye.
Ngemuva kwalokho sinezinkinobho zokudlala, okuyi-Play ejwayelekile, Stop, Pause, njll.
Ngizoshiya nekhasi lapho singalanda khona umculo weshidi ngefomethi ye-Guitar Pro, ikhasi libizwa Isendlalelo.tk
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Ukuvakasha kweTuxGuitar, i-GuitarPro Linuxero
Ngilufakile uhlelo kodwa uma sengidlale ithrekhi alunamsindo. Ngimusha kuBuntu futhi inguqulo yami ingu-12.10, ngenzani?
Kuliqiniso, njengoba kubonakala lapha:
Noma kunjalo, akuyona isoftware yamahhala futhi isicelo esikhokhelwayo. Kepha hhe ... kulabo abangenankinga, kungaba inketho ethakazelisa kakhulu.
Abazalwane bensimbi, ngiyabona ukuthi uyafunda. Yeka injabulo!
haha ngivela e-Argentina futhi ngenza i-cumbia reggaeton ne-merengue, ngazilengisa izikopelo isikhathi eside, ukuphela kwento engisele nayo izinwele ezinde,
Ngiyethemba awuqondile ... ukuthi siyazi umbango phakathi kwensimbi (mina) ne-reggaeton ...
Kepha hheyi, kubuye kube yilowo nalowo, kukhona ama-reggaeton athile engizwana naye
kahle, ngeke silwe nohlobo lomculo ... hahaha A hug XD
Haha yingakho ngithi kuncike kakhulu kumuntu
Sebevele babi kune-stallman!
Sawubona, kufanele uzame ngeJack_capture, uyadlala futhi uthwebule umsindo, angikayiboni uma isebenza noJack2 ukubona ukuthi inketho ye-capture freewell ingasetshenziswa yini
U-Andres Cordova kusho
Kukhona isiginci PRO 6 se-linux.
Phendula u-Andres Cordova
Kukhona iGuitar Pro 6 yeLinux
Unganginaki kakhulu kepha esinye isixazululo ukubheka okuthile okufana neGarageBand yeLinux, ngicabanga ukuthi lolo hlelo langenise kusuka ku-MIDI
Sawubona Nesibindi, okuthunyelwe kuhle kakhulu. Njengoba sinjalo, ngiyakubuza: kungenzeka yini ukuthi lolu hlelo luguqule ifayela lomsindo (i-wav noma i-mp3) libe yi-tablature noma i-sheet music? ungafunda i-midi bese uyiguqulela kuslature? Noma kufanele uhlele ngesandla ingoma x ukuze ukwazi ukuyilalela?
Engikwaziyo kuze kube manje ukuthi ungathola ingoma ye-x kuhlelo noma ifomethi ye-guitarpro, kepha benginokungabaza. Siyabonga ngokuthunyelwe, futhi ngilindele impendulo yakho.
Ndoda, inketho yokukhokha ayipholile kakhulu kimi ukuba nalena yamahhala eyenza insizakalo efanayo, enye into ukuthi ibidinga umsebenzi othile. Futhi i-purist ayisoze yamukela i-Guitar Pro
imikhonzo kanye nokuhalalisela
Bengicabanga ukuthi ngizokwamukelwa kabi lapha, kodwa ngiyabona ukuthi nginephutha.
Yilokho engiyenzelwe umuntu, ukukwazisa
Ine-plugin ebizwa nge-Midi File Format import-export plugin.
Angikazami kepha kubukeka sengathi kungenxa yalokhu ongitshela khona.
Noma kunjalo ngizofaka into eyodwa kokuthunyelwe, hlala ubukele
Sawubona, nginenkinga nge-guitar pro futhi ngukuthi kumacilongo nase-soprano sax amanye amanothi, avele azwakale ngezimungulu futhi angazi ukuthi ngiphendukele kubani ukungazisa ngale nkinga ecasulayo. Ngiyabonga kakhulu kusengaphambili.
Sawubona, bengivivinya, futhi ekugcineni i-tuxguitar inenketho yokungenisa ama-midis kumenyu ye- "File", umphumela ungahluka futhi ube ngqo noma cha, kuya ngobunzima bengoma nokuthi iziphi izinsimbi eziyisebenzisayo, kodwa okungenani kuyasebenza. Ukuphela kwesixazululo engisibonayo sokuguqula amanye amafomethi womsindo ukuwaguqula abe yi-midi, bese uwafaka ku-TG. Isixazululo se-rustic, kepha isixazululo.
Nge-Terminal: Ukwenza ngcono ukubonakala kwekhonsoli